Kufanele ukwazi ngaphambi uthenga i Hoverboard - Jomo Technology Co., Ltd
Nge zobuchwepheshe self sekulinganisa su, steadiness double nge gyroscope esakhiwe-futhi amandla adonsela phansi inzwa, kulula kakhulu ukuba alawule, nje ushintshe isimo somzimba wakho isisindo inhliziyo, isithuthuthu yakho ngeke kalula uthumele phambili, emuva, kwesokunxele, kwesokudla, ngisho ujike 360 diploma endaweni. Omunye sici engcono yale isikuta nguwe ixhume Bluetooth ngohlelo lokusebenza yeselula. Uma lokho kunjalo, kudingeka ukhethe umkhiqizo ephumelela kunazo ukuthi ngeke nanini sondela akudumaza ngendaba enze yayo. Now, akudingeki ukhathazeke ngokuphathelene ibhethri. Koowheel hoverboard ibhethri babe okuhlala kakhulu, ezifana k3 self kulinganisa isikuta, uhlobo ibhethri 18650 kahle eliphezulu ibhethri amaseli, ukuphila kuka-1500 nowe.
Mina akazisolanga ethenga Powerboard ngu Self Ukulinganisela 2 Wheel Electric Scooter ngisho ngokushesha nje futhi Ngingumfana bajabula kakhulu ukuvuma ke. I Self Ukulinganisela Scooter k3 nge Self-Steadiness kwiBhodi KOOWHEEL has wonke amandla amaningi ukuze sifinyelele phezu kwanoma emthambekeni 18-degeee phandle lapho, futhi kuyokusiza ukuba sifinyelele ezintsha eziphakeme ngokushesha. Riding kwakujabulisa, yize Ngangizizwa ngiyingane uma disco ogibele ubone lokhu nangenye njengoba izingane ithoyizi kuka inqubo yezokuthutha. I extra Uncika emuva noma phambili, elingenhla ijubane umshini.
Kuyinto enhle ukuzinqumela abasebenzisi beminyaka yonke. It angeke njengoba ngempumelelo-ukubizwa ngokuthi 2 Scooters self-kulinganisa ngenhla Nokho ungakhohliswa yileyo, kumane pretty okuningi njengoba ezinhle. Koowheel k3 ezimbili isondo self-kulinganisa isikuta kagesi uye akhula abe ithuluzi kudingekile ukwenza iqembu yezokwelapha ukuhambisa ngokushesha ebangeni esanele namandla. Ngakho yini eyenza Koowheel Electric Scooter ngakho ngokukhethekile? Nazo zonke izici zawo ukuthi thina wakhuluma futhi intengo yayo, ngokuqinisekile "hamba kahle manje uyibambe" isithuthuthu. Lokhu kungase kube into eyodwa uzobe ngizibuza manje ukuthi Christmas and amaholide zidlulile. Powerboard ngu Hoverboard is ultimate isikuta self-kulinganisa ukuthi kungaba imali into friendly okhuphuka nge okukhethwa best kakhulu ukuba lokugcina izwi isipiliyoni ugibele nalo. Noma kunjalo, ichopho ezilandelayo, kukhethwa engcono kumele kube ukungcebeleka epaki ..
Zethu self kagesi ibhalansi isikuta isebenzisa gyroscope ukuba ngokukhalipha ukulawula ukuzinza. Bazilungiselela nge twin motor amandla, entsha Koowheel isikuta kagesi ubhekwa phezulu wonke amasondo "hoverboards" emakethe lekutfola ngesivinini max of 8MPH kanye degrees 20 ekukhuphukeni. Segway kuyinto singlehandedly obangela popularization umbono ka ezimbili ezinamasondo, self-okulinganisa, ibhethri amandla izimoto kagesi.